Wasiirka Gaashaandhigga iyo saraakiil mileteri oo booqday magaalada Jowhar
Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya mudane Cabdixakiim Xaaji Maxamuud Fiqi iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe.
Wafdigan ayaa lagu wadaa in ay magaalada Jowhar kulamo kula yeeshaan saraakiisha ciidamada horkacaysa ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada ee shalay la wareegay gacan ku haynta magaalada Jowhar.
Waxaana la adkeeyay ammaanka magaalada Jowhar iyadoo ciidamo badan lagu arkayo wadooyinka magaalada Jowhar. Madaxdan ayaa lagu wadaa in ay meel fagaare ah kula hadlaan shacabka ku nool magaalada Jowhar sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe.
Xubnaha wafdigan ayaa noqonaya kuwii ugu horeeya ee soo gaara magaalada Jowhar tan iyo markii magaalada ay ka guurtay dowladii kumeelgaarka ahayd ee Cabdulahi Yuusuf Axmed horaantii 2006 magaalada Jowhar oo xarun u ahayd.